Izindaba - Ngabe ama-fan blade angcono?
Uma kuqhathaniswa ne "fan-blade fan" ejwayelekile, i- "fan-blade fan" inebanga elibanzi lokuphakelwa komoya, futhi inani eliguquguqukayo lezivinini zomoya ikakhulukazi amagiya amane. Uma i- "fan-blade fan" ishaywa ubusuku bonke, ngeke iphatheke kabi. Umsindo oduduzayo nophansi, ulungele kakhulu izakhamizi ezisaba umsindo lapho zilele.
Umthamo womoya namandla omoya kagesi kagesi ahlobene kakhulu nezinsimbi zomshini neziphephetha fan. Ngokuvamile, lapho izindwani zikagesi ziba ningi, kuba nomphumela omuhle wokunikezwa komoya. Yize kuzokwandisa umthwalo, lapho ama-fan blade amaningi, lapho kuncipha “umoya” kunganqunywa, okwenza umoya ovunguzayo uthambe nomphumela wesimungulu ube ngcono.
"I-fan-blade fan" isebenzisa kakhulu imigomo yamaphiko endiza nophephela. Abalandeli abenzelwe ukusebenzisa le migomo banezici ezisobala zokusebenza kahle kakhulu nomsindo ophansi.
Ngakho-ke, ngabe "abalandeli abanezinhlamvu ezine" kanye "nabalandeli bezinhlamvu ezinhlanu" bangcono kunabalandeli bendabuko "bama-blade amathathu"? Ochwepheshe embonini bathi uma kubhekwa izici zebhalansi yokujikeleza, izindwani zabalandeli bakagesi abajwayelekile ziyizinhlamvu ezingalingani. Amafeni kagesi anezinhlamvu ezibalwe ngokulinganayo athanda ukuzwakala futhi adale umonakalo lapho ejikeleza. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi umphakathi ukhethe abalandeli bakagesi abanama-blade anezinombolo ezingalingani.
Siyini isizathu sokuthi izindwani zabalandeli beziphephethi zikagesi zingakwazi ukuzungeza
1. I-motor shaft iminyene, uzokwazi ngokuswayipha ikhasi le fan ngesandla, isisombululo ukwengeza uwoyela othambisa umzimba
2. I-capacitor yokuqala iphukile, okusho ukuthi, ingxenye emnyama yegobolondo lesikwele elimnyama noma elimhlophe elilungiswe ngezikulufo ngemuva kwemoto. Ephethe izintambo ezimbili uyaphuma. Uma kukhona ithuluzi, ungakwazi ukukala capacitance. Uma lingekho ithuluzi, ungalishintsha ngqo. kancane.
3. Ikhoyili yemoto ishubhu elifushane futhi ishile. Ngokuvamile, yenza umsindo omkhulu kuphela ngemuva kokuvula imizuzu embalwa, ngaphandle kokuyivula, ukhiphe ugesi, bese uthinta imoto ngesandla sakho. Uma kushisa kakhulu, kungashiswa kuphele futhi kufinyezwe isijikelezi esifushane.
Ngabe ama-fan blade angcono? Ngokufingqa, umlandeli kagesi onamacici amahlanu kufanele aqhumise umoya ongaphezulu kunowomshini kagesi onamacici amathathu, ngakho-ke umlandeli kagesi unezinhlamvu eziningi zabantu Kungakuhle. Lapho uthenga fan kagesi, ungakhetha umkhiqizo onama-5 noma ama-6 blade. Uma i-fan blade yomlandeli kagesi ihlangabezana nenkinga ngesikhathi sokuyisebenzisa, njengesimo sokuthi ayiphenduki noma yonakele, kufanele ixazululwe ngendlela ebhekisiwe ukuze ingaphazamisi ukusetshenziswa kwansuku zonke komoya kagesi.